Adihevitra diso… mampiady | NewsMada
Adihevitra diso… mampiady
Adihevitra, hono, no atao amin’ny fanitsiana ny lalàmpanorenana, fa tsy hoe tsy maintsy hanao fitsapan-kevi-bahoaka amin’izany. Izay ilay fomba fiasan’ny fitondrana? Kitsapatsapa, fitapitaka, fivadibadihan-teny… Tsy mahagaga raha tsy atokisan’ny vahoaka amin’izay lazaina sy atao.
Oviana no mba mampiantso adihevitra, raha tsy amin’izay manahirana azy amin’ny tombontsoany sy ny toerany voatohintohina ny mpitondra? Toy ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Na tahotra tsy ho tafaverina amin’ny fitondrana intsony io, na fanahiana tsy handresy amin’ny fifidianana…
Izay mahametimety azy ihany no mahamaika sy zava-dehibe aminy, fa tsy izay tena mahasoa ny vahoaka? Mila adihevitra miainga any ifotony, ohatra, ny tsy fandriampahalemana sy ny fitsaram-bahoaka, rehefa tsy vita ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna. Aiza ho aiza, ohatra, ny anjara toeran’ny dina?
Tsy mila adihevitra miainga any ifotony koa, ohatra, ny fanomezana tany ny vahiny, ny ady sy fandrobana tany etsy sy eroa, ny fitrandrahan’ny vahiny harena an-kibon’ny tany tsy mazava fa tsy misy fampandrenesana na teny ierana… ? Na sanatria mety amin’ny mpitondra izao karazana gaboraraka izao…
Eny, na ny amin’ny fiatrehana ny fihanaky ny valanaretina pesta aza, tsy mila adihevitra amin’izay mahasoa sy mahatsara ve? Samy manao ny ataony izao, ka mila tsy ho fantatra intsony ny hoe: iza no manao inona? Izay, ohatra, no mampifandroritra ny amin’ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly na tsia.
Resaka ihany aza izay adihevitra momba ny fanitsiana ny lalàmpanorenana, fa efa ao anatin’ny kajikajy sy paipaika politika? Atao ihany ny atao. Toy ny lalàna mifehy ny fifandraisana… mamono fahafahana, tsy hita izay tohiny sy farany. Izay ilay fomba fiasan’ny fitondrana: kitsapatsapa, fitapitaka…
Mbola misy ho voafitaka amin’izany? “Afa-mamitaka ny olon-drehetra mandritra ny fotoana voafetra ianao, afa-mamitaka olona vitsivitsy mandritra ny fotoana rehetra, fa tsy ho vitanao ny mamitaka ny olon-drehetra mandritra ny fotoana rehetra“, hoy ny filoha amerikanina iray izay, Abraham Lincoln.